NextMapping | Ọzụzụ Onye ndu
Ọzụzụ Nduzi na NextMapping ™
Ọdịnihu nke ọrụ chọrọ ọhụụ nke ndị isi na ndị otu iji nweta ọhụụ.
Companieslọ ọrụ dị ka Amazon na-etinye ọtụtụ ijeri n'ime ọrụ nkwalite na ịmalite ọrụ. Ọnọdụ ahụ dịịrị ịnọgide na-adị njikere n'ọdịnihu bụ ma ndị ọrụ ma ndị ọrụ ma nke a gụnyere ilekwasị anya n'ịmụta ụbọchị niile.
Ime ka ndi ndu mgbanwe ma dikwa ike ma ndi otu n’agha aghaghi ime mgbanwe onwe ha. Thezọ kachasị mma maka mgbanwe omume bụ site na ikwugharị mmụta yana ịme ihe ndị a mụtara.
Anyị NextMapping ™ ọzụzụ ndu dị ihe niile site na Zoom, Ihe ọmụmụ n'ịntanetị lekwasịrị anya n'ọdịnihu ọrụ yana nkuzi ahaziri iche nke enwere ike ibunye site na Webinar ma obu nke akara ejiri mara gi.
Kedu ihe 2030 ga - adị ka ...
… Ma ọ bụrụ na i tinyekwuo ego gị n'ịzụlite nkà dị elu maka ndị otu gị?
Ọ bụ gị na ndị isi gị na-eburu ọdịnihu n'uche?
N'ụdị ngwa ngwa ebe ọrụ taa, uru dị asọmpị ya bụ ịbụ ndị ụlọ ọrụ na ndị otu kachasị mmepe.
Kedu ihe bụ atụmatụ gị ijide n’aka na ndị gị nwere ọzụzụ na nka kachasị ọhụrụ ruo ugbu a iji zụlite mgbanwe na ụzụ nke ụlọ ọrụ gị na-aga n’ihu?
Nnyocha na-egosi na Millenials na Gen Z ga-anọ ogologo oge maka ụlọ ọrụ ndị na-enye ohere mmụta na mmepe site na ọzụzụ.
Nchọpụta gosikwara na ọrụ ọdịnala na ọrụ ga-abụ ihe gara aga nakwa na ebe ọrụ ga-eme n'ọdịnihu ga-enwe njikọta oge, nkebi yana ndị ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ.
Nkà nka choro…
Ihe omuma di ichoro imegharia ihe ogighari n’abia:
Ike ị handleụ ọtụtụ ihe ọmụma na ịchọpụta ụzọ kacha mma
Ike iduzi mgbanwe na obi ike, ntụzịaka, nkwenye na ọhụụ
Ike ighota otutu onodu na igwa ndi ozo okwu
Ike imekorita ma mekwaa ka ndi mmadu di iche iche di iche na ndi mmadu
Ikike itinye ego teknụzụ na elekwasị anya na 'ndị mmadụ na mbụ'
Ikike imezu ọdịnihu dị mkpa nke nkà ọrụ nke 'nka mmekọrịta mmadụ na ibe ya'
76% nke CEO kwuru na ọdịnihu dị njikere mmepe maka ndị isi na ndị otu dịka mpaghara kachasị elekwasị anya ka anyị na-aga 2030.
70% nke otu kwuputara ikike ikike dị ka otu n'ime ihe ịma aka ise kachasị elu ha.
Naanị 49% nke ndị ọrụ na-ekwu na ụlọ ọrụ ha na-enye ọzụzụ ọzụzụ na ohere.
Approachzọ ohuru maka mmepe nka
Zọ nkuzi ọdịnala nke oge gara aga agaghị akwado ndị isi na ndị otu maka ọdịnihu.
A choro uzo ohuru na mmepe mmepe - uzo ohuru gunyere akwukwo akwukwo nke jikọtara na onodu oge na oru. Na NextMapping TM ndị ndụmọdụ anyị nwere nkwenye na usoro ọzụzụ nke kwekọrọ na usoro NextMapping ™ anyị.
Iji mee ka ọzụzụ 'rapara' usoro nke aka anyị na-eme ka njigide 90% ++, ọnụọgụ ngwa ngwa 70% na ọzụzụ ọzụzụ ọrụ yana ogologo oge enwere ike ị nweta ọrụ.
Nsonaazụ nke inweta mmemme ọzụzụ gụnyere:
Mmụba azụmahịa na-abawanye ka ndị isi na otu egwuregwu na-abawanye
Ntinye ohuru na mmekorita di elu n’etiti ndi isi n’etiti ndi otu
Mgbakwunye ndị ahịa na-eweta ihe mgbakwunye dị elu n'ihi ndị otu egwuregwu nwere ikike na ndị dị ike
Mmụba na mkpali dịịrị ndị ọrụ niile
Ikike dị ukwuu iji nwetaghachi ma jigide nkà dị elu
Mgbasawanyewanye nke ndị otu na itinye otu maka ịmepụta ọhụụ na elekwasị anya maka ọdịnihu
Anyị na-enye usoro iduzi na usoro ọzụzụ otu site na usoro izizi dị iche iche gụnyere na mmadụ, Virtiova site na mbugharị ma ọ bụ webEX, nkuzi vidiyo n'ịntanetị na egwuregwu.
Ndị niile gụsịrị akwụkwọ na mmemme anyị na-enweta asambodo mmecha nke NextMapping ™.